သတင်း - Linux မှ Linux မှ (စာမျက်နှာ 4)
ကွမ်တမ်ကွန်ပျူတာသည်အနာဂတ်၏ကွန်ပျူတာဖြစ်သည်။ သို့သော်ယနေ့ - Quantum Computing နယ်ပယ်တွင်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်၏တိုးတက်မှုများသို့မဟုတ်ပံ့ပိုးမှုများရှိပါသလား။
သူတို့ကအန္တရာယ်အရှိဆုံးဗိုင်းရပ်စ် (၆) ခုပါတဲ့လက်တော့ပ်ကိုရောင်းလိုက်ပါတယ်
ခေါင်းစဉ်သည်ဟာသဟုထင်ရသော်လည်း၎င်းသည်မဟုတ်ပါ၊ Guo Dong O သည်မိမိကိုယ်ကိုခေတ်ပေါ်အင်တာနက်အနုပညာရှင်တစ် ဦး အဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုတင်ဆက်သူဖြစ်သည်။
App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် low-code open source platform များ
"Low Code" နှင့် "No Code" အပလီကေးရှင်းဖန်တီးမှုပလက်ဖောင်းများသည် developer များနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များနှင့်လူကြိုက်များလာသည်။
ယခု Systemd တွင်ကုဒ်နံပါတ် ၁.၂ သန်းကျော်ရှိသည်
2017 ခုနှစ်တွင်ကုဒ်လိုင်းတစ်သန်းကျော်လွန်ပြီးနောက်, systemd Git repository ကိုယခုကုဒ်လိုင်း 1.207.302 ရောက်ရှိကြောင်းဖော်ပြသည် ...
Google နှင့် Binomial တို့သည် Basis အတွက် source code ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Google နှင့် Binomial က၎င်းတို့ဟာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုထိထိရောက်ရောက်ချုံ့ရန် codec ဖြစ်သော Basis Universal အတွက် source code ကိုဖွင့်ပြီဟုကြေငြာခဲ့သည်။
Facebook သည်သူတို့၏ဒေတာများကိုမျှဝေခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသူများ၏ privacy ကိုထပ်မံချိုးဖောက်သည်
အဆုတ်ကင်ဆာကိုရှာဖွေရာတွင်ဂူဂဲလ်သည် AI တစ်ခုကိုဖန်တီးသည်
Northwestern University ဆေးရုံနှင့်အတူ Google AI သုတေသီများသည်အဆုတ်ကင်ဆာကိုရှာဖွေနိုင်သော AI တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ကြသည်။
Firefox 67 ဗားရှင်းအသစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးယင်းသည်၎င်း၏သတင်းများဖြစ်သည်
Firefo Mozilla Firefox 67 ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာ၏ဗားရှင်းသစ်ကိုမကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ION - မိုက်ခရိုဆော့ကပြင်ဆင်နေတဲ့ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကင်းမဲ့တဲ့မှတ်ပုံတင်စနစ်
Microsoft Identity Overlay Network (ION) သည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ် Layer2ကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
တောင်ကိုရီးယားအစိုးရက Windows7ကို Linux နှင့်အစားထိုးရန်စီစဉ်နေသည်
Windows7အထောက်အပံ့အပြီးတွင်လအနည်းငယ်အကြာတွင်တောင်ကိုရီးယားအစိုးရမှအတည်ပြုရန် ...
Intel သည် OSTS တွင် Cloud Hypervisor နှင့် ModernFW ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
Intel သည်စမ်းသပ်ရင်း open source စီမံကိန်းသစ်များကိုဖွင့်လှစ်ထားသည့် Open Source Technology Summit (OSTS) ညီလာခံတွင်တင်ပြခဲ့သည်။
ကြယ်တို့၏အသံကိုတုပရန် Open Source
နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များသည်ကြယ်ပွင့်များ၏အသံကိုတုပ။ လေ့လာနိုင်သည့် GYRE ကဲ့သို့သော open source software ကိုအသုံးပြုကြသည်။
Intel သည် ၄ ​​င်း၏ပရိုဆက်ဆာများတွင်အားနည်းချက်အသစ်တစ်ခုအကြောင်း MDS (Microarchitecture Data Sampling), ZombieLoad ...
GitHub သည်၎င်း၏ဘလော့တွင် GitHub Package Registry ဟုခေါ်သော ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်တစ်ခုကို beta တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Vivaldi 2.5 ဖြန့်ချိခြင်း - ဝဘ်ဘရောက်ဇာ၏မူကွဲအသစ်
Vivaldi 2.5 သည် Razer Chroma အလင်းရောင်စနစ်အတွက်အပြည့်အဝပံ့ပိုးမှုပေးသောပထမ ဦး ဆုံး desktop ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာ
LTE / 5G ကဲ့သို့သောဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများအတွက် Kubernetes နှင့် open source သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်အဆိုပါစီမံကိန်းများအတွက်အကျိုးရှိသည်
Build 2019 ညီလာခံတွင်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်သည် Q # compiler နှင့် quantum simulators များအတွက် source code ကို development kit ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ထုတ်ပြန်လိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
Facebook သည် cryptocurrencies ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ငွေပေးချေမှုစနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ရှာဖွေနေသည်။
Qtum သည် Google Cloud မှ၎င်း၏ cloud tools များကိုကမ်းလှမ်းသည်
blockchain နည်းပညာဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်သော Qtum Chain Foundation သည် Google LLC နှင့်ပူးပေါင်းမည်ဟုယနေ့ကြေငြာခဲ့သည်။
Red Hat သည် IBM မှ၎င်းကိုမ ၀ ယ်မီ logo အသစ်ကိုပြသသည်
စီးပွားရေးဆော့ (ဖ်) ဝဲကုမ္ပဏီမှယခုအပတ်တွင်၎င်း၏တံဆိပ်သစ်ကိုပွဲထုတ်ခဲ့သည်။
Epic Games ၏ Psyonix ဂိမ်းများကိုသိမ်းဆည်းခဲ့သည်
လူကြိုက်များသော Fornite ဂိမ်းကိုထုတ်ဝေသော Epic Games သည်မကြာသေးမီကလွတ်လပ်သောဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစတူဒီယို Psyonix ၏ဝယ်ယူမှုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
DuckDuckGo သည် Do-Not-Track အက်ဥပဒေကိုအဆိုတင်သွင်းသည်
DuckDuckGo ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Gabriel Weinberg သည် Do Not Track စံသတ်မှတ်ထားသည့်လျှို့ဝှက်စနစ်အားပြန်လည်အသက်သွင်းရန်လှုပ်ရှားမှုအသစ်တစ်ခုကိုပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Apache ဆော့ဝဲလ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ blog post တွင်၊ သင်သည် code community သို့ဝင်ရောက်နေသည်ဟုကြေငြာခဲ့သည် ...
Qualcomm သည်လည်းအားနည်းချက်ရှိသည်။ ၎င်းသည် private keys များကိုထုတ်ယူနိုင်သည်
NCC အုပ်စုသည် Qualcomm ချစ်ပ်များတွင်အားနည်းချက် (CVE-2018-11976) ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးသော့များ၏ပါဝင်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
Apache NetBeans သည်အဆင့်မြင့်စီမံကိန်း (TLP) ဖြစ်လာသည်
Apache Software Foundation (ASF) သည်အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးလိုင်စင်အောက်တွင် open source software ကိုတီထွင်သည်။
Sam Hartman သည် Debian ၏ DPL အသစ်ဖြစ်သည်
Debian စီမံကိန်းခေါင်းဆောင်သို့မဟုတ် DPL အသစ်အတွက်လျှောက်ထားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတစ်လကျော်အကြာအနည်းငယ်အကြာတွင် ...
ဂူးဂဲလ်ကဖွံ့ဖြိုးဆဲ Fuchsia operating system ၏တရားဝင်ထုတ်ပြန်မှုကို developer များကစောင့်ဆိုင်းလျက်စောင့်မျှော်နေကြသည်။
Pengwin - WSL အတွက်အထူးအစီအစဉ်တစ်ခု
Pengwin သည် WSL တွင်အလုပ်လုပ်ရန်အထူးဖန်တီးထားသော GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကသတင်းများသည် Broadcom ကြိုးမဲ့ချစ်ပ်များအတွက်မောင်းနှင်သူများအားနည်းချက်လေးခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် ...
NetBSD အဖွဲ့သည် NVMM hypervisor အသစ်ကိုတီထွင်နေသည်
NetBSD ပရောဂျက်တီထွင်သူများသည်မကြာသေးမီကရှိပြီးဖြစ်သော hypervisor အသစ်နှင့်၎င်းနှင့်ဆက်နွယ်နေသော virtualization stack ကိုကြေငြာခဲ့သည်။
HermiTux သည်အနည်းဆုံးလည်ပတ်မှုစနစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသူ့ကိုယ်ပိုင် kernel (unikernel) ဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၎င်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးစဉ်ကထက်အရင်းအမြစ်များစွာစားသုံးသည်။
EverCrypt သည် HACL * နှင့် Vale မှယခင်ကမတူကွဲပြားသောစီမံကိန်းနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ပြီး ၄ င်းတို့ကိုအခြေခံပြီးစုစည်းထားသော API ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
Sailfish OS နှင့် Mer သည်စီမံကိန်းတစ်ခု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အတူတကွပူးပေါင်းကြသည်
Jolla ကုမ္ပဏီသည်မကြာသေးမီက Sailfish OS operating system နှင့် Mer open open project ကိုပေါင်းစည်းကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
Blender အသိုင်းအဝိုင်းမှကာတွန်းရုပ်ရှင်အသစ်ကိုနွေ ဦး ရာသီတွင်ပြုလုပ်ပါ
Blender သည်၎င်း၏ code software များ၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုပြသနိုင်ရန်တိုတောင်းသောရုပ်ရှင်ကားများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိခြင်းအစဉ်အလာရှိသည်။
WASI သည် browser အပြင်ဘက်တွင် WebAssembly ကိုအသုံးပြုရန် Mozilla စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်
WASI သည် WebAssembly ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဖိုင်များ၊ ဖိုင်စနစ်များကဲ့သို့သော operating system မှထောက်ပံ့ပေးသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။
Canonical မှရရှိသော Kubernetes 1.14
ယခု Canonical သည် Kubernetes 1.14 ကို၎င်း၏ပလက်ဖောင်းမှရရှိနိုင်စေရန်ခွင့်ပြုပေးပြီး Ubuntu ကိုလုပ်ငန်းနှင့် cloud ကဏ္empများတွင်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးသည်။
Chrome OS 73: အင်္ဂါရပ်များနှင့်တိုးတက်မှုအချို့နှင့်အတူဖြန့်ချိခဲ့သည်
Google ၏ Linux အခြေပြု operating system ဗားရှင်းအသစ်ဖြစ်သော Chrome OS 73 သည်တိုးတက်မှုများနှင့်သတင်းများနှင့်အတူအဓိက update အသစ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်
Linux 5.1 rc2 - နောက်ထပ်ပုံမှန်ဖြန့်ချိခြင်း
Linux 5.1 rc2, ယခုစမ်းသပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသော Linux kernel ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအသစ်၊ ပြင်ဆင်မှုများနှင့်တိုးတက်မှုအချို့
Chrome OS 73 ဗားရှင်းသစ်ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်
ဒီ Chrome OS 73 ဖြန့်ချိမှုမှာထင်ရှားတဲ့အဓိကအသစ်အဆန်းတွေထဲမှာ directory sharing function ကိုတိုးတက်စေရန် ...
၎င်းသည်လူမှုဖူလုံရေးခံစားခွင့်စီမံကိန်းများအတွက် ၂၀၁၈ အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲဆုကိုရရှိခဲ့သည်
ရစ်ချတ် Stallman က LibrePlanet 2019 ကွန်ဖရင့်၌ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲဆုများချီးမြှင့်ခြင်းခံရသူများကိုကြေငြာခဲ့သည်။
Cloudflare သည် HTTPS ၏ကြားဖြတ်စစ်ဆေးခြင်းကိရိယာများကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
Cloudflare ကုမ္ပဏီသည် HTTPS အသွားအလာကြားဖြတ်မှုကိုရှာဖွေရာတွင်အသုံးပြုသော mitmengine စာကြည့်တိုက်အပြင်ဝက်ဘ်ဝန်ဆောင်မှုကိုတင်ပြခဲ့သည်။
ထို့အပြင် GDC 2019 (Game Developers Conference 2019) နှင့်ပါတ်သက်သောထပ်ဆင့်သတင်းများအားထပ်ဆင့်ထပ်ဆင့်ပြသသူများကတင်ပြသည်။
ဒုတိယကမ္ဘာ - Linux အတွက်တည်ဆောက်မှုနှင့်အတူဆောက်လုပ်ရေးဂိမ်း
အကယ်၍ သင်သည်ဆောက်လုပ်ရေးဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါကဒုတိယကမ္ဘာမြေကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီး၎င်းသည်၎င်းအတွက် Linux အတွက်တည်ဆောက်ထားကြောင်းကိုလည်းသိသင့်သည်
Wayland 1.17 ဗားရှင်းအသစ်ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်
တည်ငြိမ်သော Wayland 1.17 protocol အသစ်ကိုမကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။
Nvidia single-deck ကွန်ပျူတာကိုကြေငြာပြီးနောက် GPU နည်းပညာညီလာခံမှသတင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပါသည်။
Google Stadia: မိုက်ခရိုဆော့ဖ်၊ Sony နှင့် Nintendo ဂိမ်းစက်များသေဆုံးခြင်း?
ဂူဂဲလ် Stadia သည်အခြားဗီဒီယိုဂိမ်းပလက်ဖောင်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ဂိမ်းကစားသူများအားဆွဲဆောင်နိုင်မည့်ဂိမ်းပလက်ဖောင်းဖြစ်ပြီးသင် Linux ဖြစ်ပါကသင်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်
Nvidia Jetson Nano - AI အပလီကေးရှင်းဖြန့်ကျက်ရန်ကွန်ပျူတာ
လတ်တလောအတုထောက်လှမ်းရေးတိုးတက်မှုများကအသိအမှတ်ပြုခြင်းကဲ့သို့သော application များအတွက်အသုံးပြုသော algorithms များစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
SUSE သည် EQT မှဝယ်ယူပြီးနောက်လွတ်လပ်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်
မတ်လ ၁၅ ရက်တွင် SUSE မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကြီးထွားလာနေသော EQT သည် Micro Focus အားဝယ်ယူပြီးသည့်နောက်တွင်ထပ်မံလွတ်လပ်မှုရှိသည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
BackBox Linux - pentesting အတွက် distro
Backbox သည် pentesting နှင့်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများအတွက်လူသိများသောဖြန့်ဖြူးခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့သင်ကသင်မသိခဲ့ပါကသင့်ကိုတင်ပြခွင့်ရှိသည်။
Debian Project Leader (သို့မဟုတ် DPL) သည် Debian စီမံကိန်း၏တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Debian တည်ဆောက်သူဖြစ်ရမည်။
Redmond ကုမ္ပဏီကိုမူပိုင်ခွင့်မပေးဘဲ Android မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများသို့မဟုတ်ရောင်းချသူများနှင့်ပတ်သက်ပြီး Microsoft ကတိုင်တန်းသည်
Google က Android Q ကို beta လွှတ်တင်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်
မနေ့က Google သည် developer များအတွက်ရည်ရွယ်ထားသည့် "Android Q" အမည်ဝှက်ထားသော Android version အသစ်တစ်ခုကို preview ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
NetOps နှင့် DevOps တို့ကိုပေါင်းစည်းရန်အတွက် F5 သည် NGINX ကိုဒေါ်လာသန်း ၆၇၀ ဖြင့် ၀ ယ်ခဲ့သည်
Nginx Inc. နှင့် F5 Network တို့ကစုစုပေါင်းစီးပွားရေးတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၆၇၀ ဖြင့် Nginx အားနောက်ဆုံးဝယ်ယူခဲ့သည်ဟူသောသတင်းကိုပူးတွဲကြေငြာခဲ့သည်။
CHIPS Alliance: ပွင့်လင်းချစ်ပ်များအတွက် Linux Foundation အောက်ရှိစီမံကိန်းအသစ်
CHIPS Alliance သည် RISC-V ကို အခြေခံ၍ အနာဂတ် open-source ချစ်ပ်များကိုယူဆောင်လာရန် Linux Foundation ၏လက်အောက်တွင်စီမံကိန်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Alzheimer ကိုစောစောစီးစီးရှာဖွေရန်အတွက် IBM သည်စက်သင်ကြားခြင်းပုံစံများကိုတီထွင်ခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်း IBM သည်အသိအမှတ်ပြုခံထားရသောအမေရိကန်နိုင်ငံစုံနည်းပညာနှင့်အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
MirageOS 3.5 ဗားရှင်းအသစ်သည် Unikernels ဖန်တီးရန်စာကြည့်တိုက်တစ်ခုရောက်ရှိလာသည်
MirageOS သည်အသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခု၏လည်ပတ်မှုစနစ်များကိုဖွဲ့စည်းရန်ခွင့်ပြုပေးပြီး၎င်းကို unikernel အဖြစ်ပို့သည်။
Maru OS သည် Android အတွက် Linux operating system တစ်ခုဖြစ်သည်
Maru OS သည်စမတ်ဖုန်းများအတွက် operating environment တစ်ခုဖြစ်ပြီး "Android" နှင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက် operating system ကိုပေါင်းစပ်ထားသော ...
Ubuntu Touch OTA-8 ဗားရှင်းသစ်ကိုဖြန့်ချိပြီးဖြစ်သည်
ဤ OTA-8 အသစ်ထွက်ရှိမှုနှင့်အတူအဓိကပြောင်းလဲမှုများသည် Morph Browser ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာကိုအဓိကသက်ရောက်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သည်။
သင်၏အချက်အလက်များကို encrypt လုပ်၍ ကာကွယ်ပေးသော open source USB Nitrokey
Nitrokey သည်လုံခြုံသောအချက်အလက်လက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့်စာဝှက်ခြင်းပြုလုပ်ရန်အတွက် open source USB key ဖြစ်သည်။ လျှို့ဝှက်သော့များကိုအမြဲအတွင်းသိမ်းဆည်းထားသည်။
နောက်တစ်ခုဖြစ်သော MariaDB Enterprise Server 10.4 ကိုကြေငြာခဲ့သည်
မကြာမီက MariaDB ကော်ပိုရေးရှင်း MariaDB Enterprise Server 10.4 ၏နှစ်ပတ်လည်ကွန်ဖရင့်၌မူကွဲသစ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။
WiPhone - EDI မှတစ်ဆင့်ပြုပြင်လို့ရပါတယ်
WiPhone သည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်မိုဘိုင်းအိုင်ဖုန်းဖုန်းဖြစ်သည်။ WiPhone သည်ဟက်ကာများ၊ modular၊ စျေးပေါ၊
Linux Foundation မှအဖွဲ့ဝင်အသစ် ၃၄ ယောက်ထပ်မံဖြည့်စွက်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်
အသစ်ထပ်တိုးသောကုမ္ပဏီများသည် Automotive Grade Linux, Ceph Foundation နှင့်အခြားသော Linux Foundation စီမံကိန်းများတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေကြသည်။
မကြာသေးမီက Qt ၅.၁၂ စတင်ခြင်းနှင့်အတူ Qt ကုမ္ပဏီ၏ "သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု" အတွက်တာဝန်ယူထားသောဒုတိယဥက္ကPresident္ဌ Tuukka Turunen ကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည်။
Purism Librem5ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တတိယသုံးလပတ်တွင်ရောက်ရှိမည်
Linus Torvalds က ARM သည်ဆာဗာဈေးကွက်အတွက်မဟုတ်ပါဟုပြောကြားခဲ့သည်
Linus Torvalds နှင့်အချို့အတွက်မူဤတည်ဆောက်ပုံသည်ဆာဗာများ၏မိသားစုတွင်ပြtheနာများစွာရှိသောကြောင့်အောင်မြင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
postmarketOS: Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းသည်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်အဓိကထားသည်
သင်သည်သင်၏လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အသစ်သောအရာတစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဖြေရှင်းနည်းများကိုပေးသော postmarketOS Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းအကြောင်းကိုဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုနိုင်သည်
Chrome တွင်အပြောင်းအလဲများရှိလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာများသည် incognito mode ကိုမတွေ့ပါ
ဂူးဂဲလ်က၎င်းသည်သီးသန့် browsing mode တွင်သီးသန့်တည်ရှိမှုအတွက်အန္တရာယ်မရှိဘဲအသုံးပြုနိုင်ရန် FileSystem API ကိုပြုပြင်နေကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
OpenColorIO သည် Spider-Man တွင် Spider-Verse သို့သုံးသောကိရိယာဖြစ်သည်
Oracle က JDK 12 ကိုပထမဆုံးဖြန့်ချိမည့်ကိုယ်စားလှယ်ကိုကြေညာခဲ့သည်
Oracle သည်မတူညီသောပလက်ဖောင်းများအတွက်ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ရန် JDK 12 ၏ Release Candidate ၏ပထမဆုံး version ကိုကြေငြာခဲ့သည်။
ယဉ်ကျေးမှု VI - ကြီးမားတဲ့လျှော့စျေးမှာကစား
Civilization VI သည် Linux အတွက်အချိန်နှင့်တပြေးညီမဟာဗျူဟာမြောက်ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုအခါတွင်သင်ကစားနိုင်ပြီဖြစ်သည်
အားနည်းချက်အသစ်တစ်ခုကို Systemd တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်
(CVE-2019-6454) တွင်ဖော်ပြထားပြီးသော systemd တွင်အားနည်းချက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည် initialization ဖြစ်စဉ်ကိုပျက်စေနိုင်သည်။
အီးယူ၏ဆောင်းပါး ၁၁ နှင့် ၁၃ သည်သတင်းအချက်အလက်ဝေမျှပုံကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်
ဥရောပယူနီယံကဂူဂဲလ်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသူတို့၏ဝင်ငွေကိုဖန်တီးမှုဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်မျှဝေရန်နှင့်အကာအကွယ်ပေးထားသောအကြောင်းအရာများကိုဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်။
Oregon မှ Ron Wyden ကကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်ခေါင်းဆောင်များ ၀ န်ထမ်းများအားထောင်ဒဏ် (သို့မဟုတ်) ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာဒဏ်ကြေးဖြင့်ငွေပေးချေရန်တောင်းဆိုသည်
IPv4 လိပ်စာများသည်ကုန်တော့မည် ဖြစ်၍ IPv6 သို့ပြောင်းရန်အချိန်ရောက်လာပြီ
အိုင်ပီလိပ်စာများကိုသိမ်းဆည်းခြင်းသည်အင်တာနက်အစတွင်စိုးရိမ်စရာမဟုတ်ပါ။ ကုမ္ပဏီအချို့အားလုပ်ကွက် ၈ ခု (လိပ်စာ ၁၆ သန်း) သတ်မှတ်ထားသည်။
ဂူဂဲလ် Asylo စီမံကိန်း - လျှို့ဝှက်ကွန်ပျူတာ
ဒီနေ့မှာဂူးဂဲလ် Asylo ပရောဂျက်ကိုလျှို့ဝှက်ကွန်ပျူတာအတွက်လောင်းကစားရန်ရည်ရွယ်သည့်အစီအစဉ်အသစ်ကိုတင်ပြသည်
Purism ကသင်၏ Librem5စမတ်ဖုန်းအတွက်ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်ကိုသင်ပေးလိုသည်
Purism သည်အသိုင်းအဝိုင်းတွင်လူသိများသောသူတို့၏ Librem5စမတ်ဖုန်းများအတွက်ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုမည်သို့ဒီဇိုင်းဆွဲရမည်ကိုသင်ပေးလိုပုံရသည်
Red Hat သည် JBoss 7.2 ဗားရှင်းသစ်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
မကြာသေးမီက Red Hat ၏ဘလော့ဂ်တွင်ကြေငြာချက်တစ်ခုအရ ၄ င်း၏ပလက်ဖောင်းဗားရှင်းအသစ်ရရှိနိုင်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
တည်ငြိမ်သော LibreELEC 9.0 ဗားရှင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
တည်ငြိမ်သော LibreELEC 9.0 ပရောဂျက်ကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ...
System76 က Linux Darter Pro Laptop ကိုသက်တမ်းတိုးလိုက်သည်
System76 သည်စပိန်ကုမ္ပဏီ Slimbook ကဲ့သို့သော preinstalled Linux နှင့်အတူလက်တော့ပ်များပေါ်တွင်လောင်းကစားသည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်
NVIDIA တွင် Linux အတွက် driver အသစ်တစ်ခုရှိသည်
NVIDIA တွင် Linux အတွက် driver အသစ်တစ်ခုရှိပြီးအမေရိကန်ကုမ္ပဏီမှထို GPU များပိုင်ရှင်များအတွက်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောတိုးတက်မှုများရှိသည်
ထုတ်ကုန်များ၊ လိုင်စင်များနှင့် ၀ န်ထမ်းများ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်များအသုံးပြုခြင်းသည်အဖွဲ့အစည်းများအကြား ဆက်လက်၍ တိုးတက်နေသည်။
Raspberry Pi Compute Module 3+ အသစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Raspberry Pi စီမံကိန်းကို developer များကအများပြည်သူထံရောင်းချရန်အတွက် Raspberry Pi Compute Module 3+ ကဒ်ကိုရရှိပြီဟုကြေငြာခဲ့ကြသည်။
CPU နှင့် GPU အတွက် bug fixes နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုများစသည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောတိုးတက်မှုများပါ ၀ င်သည့် DXVK 0.96 version အသစ်ကိုစာရင်းပြုစုပါ။
သင် open source ပရောဂျက်များ၌ MOOCs ကိုရှာနေမယ်ဆိုရင် edx သည်သင့်အတွက်သတင်းကောင်းရှိပြီးသင်၏ repertoire သင်တန်းသင်တန်းများကိုမွမ်းမံထားသည်
Debian 9.7 Strech ကို APT patch ဖြင့်လွှတ်ခဲ့သည်
Debian 9.7 Strech သည်အားနည်းချက်ရှိသော APT အတွက် patch ကိုမီးမောင်းထိုးပြပြီးအဓိက update နှင့်အတူဤတွင်ရှိနေသည်။
Google သည် Chromium တွင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန်နှင့် block block များကိုဖယ်ရှားလိုသည်
ဖြစ်ရပ်တော်တော်များများအတွက်ပိတ်ဆို့ခြင်းများကိုဖယ်ရှားရန်အတွက် Google သည် webRequest API ၏ပိတ်ဆို့ထားသော version ကိုကန့်သတ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
Spygate: Linspire ကဆက်လုပ်သွားသည်။
Linspire, Microsoft ၏ "လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သစ်" နှင့် Windows linuxero ဟုဟန်ဆောင်သောပြန်လည်မွေးဖွားသော GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းမှအရိပ်အချို့။
သဘောထားကွဲလွဲမှုများကြောင့် Debian အား systemd ထိန်းသိမ်းသူမရှိဘဲထားခဲ့သည်
systemd 240 ဗားရှင်းတွင် regressive ပြောင်းလဲမှုပေါ်ပေါက်လာခြင်းကြောင့်ပိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် DuckDuckGo သည်သုံးစွဲသူများကို profiling စွပ်စွဲသည်
DuckDuckGo မှရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည် browser fingerprinting အသုံးပြုသည်ဟူသောစွပ်စွဲချက်ကိုငြင်းဆိုခဲ့သည်။ Fingerprinting သည်ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ခြေရာခံခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
AMD သည်၎င်း၏ Radeon VII ကိုပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးသော 7nm စားသုံးသူ GPU ဖြစ်သည်
Radeon VII အသုံးပြုသောဒုတိယမျိုးဆက် Vega ဂရပ်ဖစ်ကဒ်၏တည်ဆောက်ပုံသည်စွမ်းဆောင်ရည် ၂၀-၄၂% ပိုပါသည်
Mozilla မှထုတ်လုပ်သောမိုဘိုင်း browser သစ် Fenix
ဤ“ Fenix” ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာအသစ်သည် Mozilla ၏ GeckoView အင်ဂျင်နှင့်စာကြည့်တိုက်များအပြင်အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကိုအခြေခံသည်။
Fedora ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ကိုယ်စားကိုယ်စား Red Hat Designer Marin Duffy သည်လူထုဆွေးနွေးပွဲသို့တင်ပြခဲ့သည်။
VLC Media Player သည် download ၃ ဘီလီယံအထိရောက်ရှိခဲ့သည်
Nvidia သည် GeForce RTX 2060 နှင့် FreeSync အထောက်အပံ့များကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်
Linux 4.21 မရှိပါ။ Linux 5.0 ဟုအမည်ပြောင်းမည်
Linux 5.0 ကို Linux 2019 ဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကိုဆက်လက်မလုပ်ကိုင်လိုသော Linus Torvalds ကြေငြာပြီးနောက်4တွင်ရောက်ရှိလာသည်။
Chromium developer များက Nouveau ကိုနာမည်ပျက်စာရင်းထဲသို့ထည့်သွင်းထားသည်
ရက်အနည်းငယ်အကြာက Chromium ပရောဂျက်အတွက်တာဝန်ရှိသူများသည်သူတို့၏နာမည်ပျက်စာရင်းသို့အချို့သောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ဖွဲ့စည်းမှု: Open-source အတွက် 2019 သစ်လမ်းကြောင်းသစ်?
Composability - 2019 တွင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်မိုimprove်းတိမ်တိုးတက်ရန်ပြောစရာများစွာရှိသည့်စကားလုံး
Underworld Ascendant - Linux ဝေဖန်မှုများနှင့်ပံ့ပိုးမှု ...
Underworld Ascendant သည်အချို့သောသူများ၏မကောင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်မှုများကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်ဗွီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Linux အထောက်အပံ့ကိုအကျိုးသက်ရောက်ပုံမပေါ်ပါ
ရပ်ရွာအခြေပြု၊ အကျိုးအမြတ်မယူသောလက်မှတ်စင်တာ၊ Let's Encrypt သည်အခမဲ့လက်မှတ်များ ...
Open source ပရောဂျက်များသည်ပညာရေးစာသင်ခန်းများတွင်အောင်မြင်သည်
ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ကျောင်းများထက်ပိုပြီးအောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့ပြီးတိုးတက်မှုမှာလည်းအလားအလာကောင်းသည့် ၂၀၁၉၉ ခုနှစ်တွင်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်
Linux Kernel 4.20 သည်ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်ရောက်ရှိလာသည်
မနေ့က Linux Kernel စီမံကိန်း၏ခေါင်းဆောင်နှင့်ဖန်တီးသူ Linus Torvalds သည်ဤဗားရှင်းအသစ်ကို Linux 4.20 သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ဗို့ဗားသည် Proton 3.16.6 ၏ beta ဗားရှင်းသစ်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
ပရိုတွန်သည် Linux သုံးစွဲသူများအား ၀ င်းဒိုးအတွက်သာ Linux Steam သုံးစွဲသူမှဂိမ်းကစားခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။
LibreOffice 6.1.4 ကိုအဓိကတိုးတက်မှုများဖြင့်ဖြန့်ချိခဲ့သည်
Libreoofice 6.1.4 ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကျော်ကြားသော free office suite version အသစ်သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်တိုးတက်မှုများနှင့်အတူရောက်လာသည်
Nvidia PhysX 4.0 ဗားရှင်းအသစ်ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်
လအစောပိုင်းကတော့ Nvidia မှဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဘလော့ဂ်ပေါ်မှာငါတို့တင်ခဲ့သည်။
Slimbook Eclipse: အလွန်ဇိမ်ကျကျအလုပ်သစ်နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းအသစ်
multimedia တည်းဖြတ်ခြင်း၊ virtualization နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်လက်တော့ပ်ကောင်းကောင်းရှာဖွေနေသူအားလုံးသည်ကံကောင်းပါစေ၊ ယခုတွင် Slimbook Eclipse Linux နှင့်လာသည်။
KDE desktop ပတ်ဝန်းကျင်သည် Snap package သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်
KDE Plasma developer များသည်၎င်းတို့၏ desktop ပတ်ဝန်းကျင်တွင်စမ်းသပ်မှုအချို့ပြုလုပ်နေပြီးဖြန့်ဝေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။
Linux 4.20-rc7 သည်ယခုအချိန်တွင် download လုပ်ရန်နှင့်စမ်းသပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ
Linux7kernel ၏ Release Candidate 7th သို့မဟုတ် RC4.20 ရောက်ရှိလာသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အသေးစားပြောင်းလဲမှုဖြစ်သော်လည်း
KDE Applications ၏မူကွဲအသစ် 18.12 ရောက်လာပြီ
KDE Applications 18.12 ဗားရှင်းသစ်ကိုမကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်အသုံးပြုသူများအဆင်ပြေသော application များပါဝင်သည်။
Ubuntu Touch OTA-6 ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်
Ubuntu Touch ကိုအဆင့်မြှင့်တင်မှုအသစ်ပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ မသေသေးသောမိုဘိုင်းစနစ်ကိုရပ်ရွာကဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်
စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အသိအမြင်ဆိုင်ရာကိစ္စများက IRS ကိုလာမည့် ၂၀၂၀ အထိ Linux သို့ကူးပြောင်းမှုကိုရပ်တန့်စေခဲ့သည်
အကယ်ဒမီဆော့ဖ်ဝဲဖောင်ဒေးရှင်း - အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏ရုပ်ရှင်ဘေးထွက်
အကယ်ဒမီဆော့ဖ်ဝဲဖောင်ဒေးရှင်းကိုတည်ထောင်ရန်သဘောတူညီချက်အသစ်ဖြင့် Linux Foundation သည်၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့်မဟာမိတ်များနှင့်အတူသူ့ဟာသူအားကောင်းလာစေရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်
Nvidia သည် NVIDIA PhysX source code ကိုအများပြည်သူသို့ထုတ်ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က NVIDIA သည်၎င်း၏အင်ဂျင်ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန် NVIDIA PhysX အရင်းအမြစ်ကုဒ်ရရှိနိုင်ကြောင်း၎င်း၏ဘလော့ဂ်အားဖြင့်ကြေငြာခဲ့သည် ...
Simplenote - ရိုးရိုး Cross-platform Note Editor
Simplenote သည် cross-platform တစ်ခုဖြစ်သည် (Linux, Windows, Mac, iOS နှင့် Android) WordPress ကိုတီထွင်သူများတီထွင်ထုတ်လုပ်သည့်မှတ်စု ...
Google, Facebook နှင့် Uber တို့သည် OpenChain စီမံကိန်းတွင်ပါ ၀ င်သည်
Google, Facebook နှင့် Uber တို့သည်ပလက်တီနမ်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာမည်။ Shane Coughlan, OpenChain ၏အထွေထွေမန်နေဂျာ ...
အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ၎င်း၏လှူဒါန်းမှုသည်ဒေါ်လာသန်းတစ်ရာလှူဒါန်းကြောင်း၎င်း၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဒီငွေပမာဏကိုလှူဒါန်းခဲ့သည် ...
OpenXRay: STALKER အတွက် Call of Pripyat အတွက်တိုးတက်လာသောဂရပ်ဖစ်အင်ဂျင်
OpenXRay သည် STALKER: Call of Pripyat အတွက်ဂရပ်ဖစ်အင်ဂျင်ပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Linux အတွက်အပြင်းအထန်ကြိုးပမ်းနေသည်
ဖုတ်ကောင်ထိတ်လန့်! နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့တွင် Linux သို့ရောက်ရှိမည်
ဗီဒီယိုဂိမ်း Zombie Panic! နိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၈ တွင် Linux ကိုလာမည်
အားနည်းချက် (၂) ခုကို Linux kernel service of denial တွင်တွေ့ရှိရသည်
ယခုအပတ်ကာလအတွင်း Linux kernel နှင့်ပတ်သက်သောပြproblemsနာအမျိုးမျိုးအတွက်အဖြေအချို့ကိုထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့လည်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် ...
Docker သည် open source project တစ်ခုဖြစ်ပြီး application container များအား software container များအတွင်း၌ဖြန့်ကျက်ခြင်းကိုအလိုလျောက်ပြုလုပ်နိုင်ပြီးထပ်ဆင့်အလွှာတစ်ခုကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မျှတသောသို့မဟုတ်ဖွင့်လှစ်သောနည်းပညာများအတွက်ရည်စူးသည့်အဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည့် Librecon 2018 ကဲ့သို့သောဥရောပတွင်အခြေခံစံနှုန်းတွင်ဖြစ်ပျက်သမျှကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြသည်
Kodi (ယခင် XBMC ဟုလူသိများသည်) သည်ဗီဒီယိုများ၊ တေးဂီတများကစားခြင်းအတွက်ဆုရလွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ် (GPL) ဆော့ဖ်ဝဲလ်အချက်အချာဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောကွန်ပျူတာများကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ပေါက်ကြားစေသောအားကောင်းသော NSA exploits များဖြန့်ကျက်ပြီးတစ်နှစ်အကြာတွင် ...
Linux Foundation သည် Ceph ဖောင်ဒေးရှင်းသစ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်
Linux Foundation သည်ဘာလင်တွင်အခြေခံအုတ်မြစ်အသစ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ Ceph Foundation သည်အဖွဲ့ဝင် ၃၀ ကျော်နှင့်စတင်အလုပ်လုပ်သည်။ မင်းလုပ်ချင်တာက ...
Firefox developer များက Wayland နှင့်ပိုမိုသောအရာများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်
Firefox ဝဘ်ဘရောက်ဇာကိုတာဝန်ယူသော developer များကတော်တော်များများအလုပ်လုပ်နေကြသည်။ သူ၏စမ်းသပ်ဗားရှင်းတွင် Firefox Nightly ဗားရှင်းသည်ယခုပင်ဖြစ်သည်။
LIBRECON သည်၎င်း၏ ၈ ကြိမ်မြောက်ထုတ်ဝေမှုအစီအစဉ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်
Librecon သည်ဥရောပတောင်ပိုင်းရှိ open source နည်းပညာများကိုအာရုံစိုက်သည့်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး၎င်း၏အစီအစဉ်ကို ၂ ရက်ကြာကြေညာခဲ့သည်။
Samsung ကို Dex adapter ပါ ၀ င်သော smart devices များ၌ထည့်သွင်းအသုံးပြုမည်
Samsung သည်စမတ်ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်ခြင်းအားဖြင့် desktop တစ်ခုလုံးကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုနိုင်သည့် Linux ပတ်ဝန်းကျင်တွင်စမ်းသပ်မှုစတင်ခြင်းကိုကြေငြာခဲ့သည်
မကြာသေးမီကရုရှားသုတေသီတစ် ဦး သည် VirtualBox တွင်အားနည်းသောနေ့ရက်၏အားနည်းချက်ကိုအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်တိုက်ခိုက်သူအားထွက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
Ikey Doherty သည် Solus ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အမြစ်ကိုလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းသို့လွှဲပြောင်းပေးသည်
ယခု Solus စီမံကိန်းကိုတည်ထောင်သူ Ikey Doherty နှင့်အမည်တူဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် Budgie ဝန်းကျင်သည်ပွင့်လင်းသောစာတစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Linux 5.x: kernel branch သည် 2019 ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် numing ခုန်တက်သွားလိမ့်မည်
Linux 4.20 ကိုဖြန့်ချိခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်ရောက်ရှိလာမည့် Linux4အတွက်လမ်းဖွင့်ရန် 5.0.x kernel ၏ဤဌာနခွဲသည်အဆုံးသတ်သွားပါပြီ။
Firefox 63 သည်အသစ်ပြောင်းခြင်းဖြစ်သော Firefox 63.0.1
Mozilla Firefox သို့မဟုတ် Firefox ဟုလူသိများသော Linux, Android, IOS, OS X နှင့် Windows အတွက်တီထွင်ထားသောအခမဲ့၊ ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ် web browser တစ်ခုဖြစ်သည်။
Red Hat သည် IBM ၀ ယ်ပြီးနောက်ပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်ပါ
IBM ကပွင့်လင်းတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီ Red Hat ကို ၀ ယ်လိုက်ပြီဆိုတာငါတို့အားလုံးသိတယ်။
Linus Torvalds သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်၊ CoC နှင့် Linux ကိုစားပွဲခုံများပေါ်တွင်ဆွေးနွေးသည်
Linus Torvalds သည် Linux စီမံကိန်းကိုပြန်လည် ဦး ဆောင်ခဲ့ပြီးမကြာသေးမီကကမ္ဘာ့လှုပ်ရှားတက်ကြွသူ Swapnil Bhartiya အားသီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။
IBM က Red Hat ကိုဒေါ်လာ ၃၄ ဘီလီယံနဲ့ဝယ်လိုက်တယ်။
Red Hat ကိုဝယ်ယူပြီးသည်နှင့် Red Hat သည် IBM ၏ hybrid cloud team တွင်လွတ်လပ်သောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာလိမ့်မည်။
Exodus သည် cryptocurrencies နှင့် ၀ ယ်ယူနိုင်သောမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာသည်
ယနေ့ HTC သည်ထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး HTC သည် Android နှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်အခြေခံများအနေဖြင့် ...
KUnit - Linux kernel အတွက်ယူနစ်စစ်ဆေးခြင်းအသစ်တစ်ခု
KUnit သည် Linux kernel အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသောပေါ့ပါးသော drive simulation and testing framework ဖြစ်သည်။ ယူနစ်စစ်ဆေးမှုများသေချာပေါက်ရှိသည် ...
Linus Torvalds ၏အားလပ်ရက်ပြီးဆုံးသွားပြီ
Linus Torvalds သည်ကြာရှည်စွာခွဲခွာပြီးနောက်သူတိုးတက်စေရန်အကူအညီရရှိပြီးနောက် Linux kernel ကိုတီထွင်ရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်
HAT Tv - Raspberry Pi အတွက် hardware extension တစ်ခု
ဒီ add-on အသစ်နဲ့ Raspberry Pi ကို ၀ ယ်ယူပြီးသုံးစွဲသူများသည်ရုပ်မြင်သံကြားကိုကြည့်ရှုနိုင်အောင်စီစဉ်နိုင်သည်။
Crossover 18 သည် DirectX အထောက်အပံ့အတွက်တိုးတက်မှုနှင့်အတူရောက်လာသည်
မကြာသေးမီက Codeweavers ၏ developer များသည် Crossover 18 အသစ်ကိုယခုအခါအခြေပြုသည့်ကြေငြာချက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Microsoft သည် Linux အားမူပိုင်ခွင့်တောင်းဆိုမှုများမှကာကွယ်ရန်အစပြုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်
Open Invention Network (OIN) သည် Linux ဂေဟစနစ်ကိုမူပိုင်ခွင့်တောင်းဆိုမှုများမှကာကွယ်ရန်ရည်ရွယ်သည်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က LibreOffice သည် Qt-based ပတ်ဝန်းကျင်များနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံတစ်ခုအနေဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပေါင်းစည်းမှုအတွက် interface plugin ကို Qt5 တွင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Linux ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် Q & A ဗီဒီယိုအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် Greg Kroah-Hartman သည် Meltdown နှင့် Spectre နှင့်ပတ်သက်သောပြtalksနာများကိုဆွေးနွေးသည်။
Steam သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်အမှားအယွင်းများပြီးနောက် GNU / Linux distros များသည် Valve ဗီဒီယိုဂိမ်းပလက်ဖောင်းတွင်အမြင့်ဆုံးသမိုင်းဝင်
Wi-Fi Alliance မှကြေငြာချက်အရ Alliance မှစီမံခန့်ခွဲသောကြိုးမဲ့ LAN နည်းပညာများ၏အမည်ကိုရိုးရှင်းအောင်ပြုလုပ်ရန် ....
Richard Stallman: Commons Clause လိုင်စင်သည်အခမဲ့မဟုတ်ပါ
Richard Stallman သည် Commons Clause လိုင်စင်ကိုကြေငြာခဲ့ပြီး၎င်းသည်လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်လိုင်စင်မဟုတ်ကြောင်း၊ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့်
Aurum အမည်ရှိအသက် ၂၂ နှစ်ရှိကွန်ပျူတာသိပ္ပံကျောင်းသားတစ် ဦး သည် Steam အတွက် phishing လိမ်လည်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ဖော်ပြခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးနှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် PlayOnLinux 5.0 ၏ Alpha version ထွက်လာသည်
PlayOnLinux 5.0 Alpha ၏ဖြန့်ချိထားသော alpha version သည်လုံးဝဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော user interface ကိုတပ်ဆင်ပြီး၎င်း၏ "Phoenicis" ပလက်ဖောင်းအသစ်ကိုလွှတ်တင်လိုက်သည်။
Linux 4.19-rc5: ဖြစ်ပျက်ပြီးနောက် Greg ၏လက်မှလွတ်မြောက်လာသည်။
rc4.19 ပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် Linux 5-rc4 သည် Linus Torvalds သည်စီမံကိန်းကိုခေတ္တစွန့်ခွာသွားကြောင်းသတင်းကြားခဲ့သည်။
IssueHunt - ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအတွက်ပလက်ဖောင်းအသစ်
developer များအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောအဆိုပြုလွှာတစ်ခုအဖြစ်မြှင့်တင်ခံထားရသော platform အသစ်ဖြစ်သော IssueHunt အကြောင်းအနည်းငယ်ပြောပါမည်။
Fedora 29 Beta ကိုလာမည့်အပတ်တွင်ဖြန့်ချိမည်
Fedora 29 Beta ကိုယခုနှစ်စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင်စီစဉ်ရန်စီစဉ်ထားသော်လည်းစက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင်ဖြန့်ချိမည်။
Purism သည်၎င်း၏ Librem Key ကိုအခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလ်သုံးအင်္ဂါရပ်များပါရှိသောလုံခြုံရေးသော့ကိုပေးသည်
Debian သည် Specter V4 နှင့် V3a တို့၏လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ update များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
မကြာသေးမီက Debian Project မှတာဝန်ယူသောဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့သည်စီးရီးမှသုံးစွဲသူများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် Intel microcode firmware ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
GTK + သည်ဗားရှင်း 3.24.1 အသစ်အတွက်တိုးတက်မှုများနှင့်အတူရောက်လာသည်
GTK + (သို့) ယခင်က GIMP Toolkit ဟုလူသိများသော၊ သည်ပလက်ဖောင်းပလက်ဖောင်းများဖြစ်ပြီး interfaces များဖန်တီးရာတွင်အသုံးပြုသည်
လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ခန့်က PoE HAT plug-in ကို ၀ ယ်ခဲ့သော Raspberry Pi သုံးစွဲသူများစွာသည်များစွာသောတောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဤအခါသမယတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Kano စတင်မိတ်ဆက်သောပစ္စည်းသေးသေးလေးတစ်ပုဒ်အကြောင်းပြောပါမည်။ ကျွန်ုပ်အမြင်သည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူပြောင်းလဲရန်ရည်ရွယ်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည် ...
Linus Torvalds သည် Linux ဖွံ့ဖြိုးမှုမှထွက်ခွာပြီးတောင်းပန်သည်
LKMLs Fire on, Linus Torvalds သည် Linux 4.19 RC အသစ်ကိုကြေငြာပြီးစီမံကိန်းမှအနားယူခြင်းနှင့်အပြုအမူအတွက်တောင်းပန်ခြင်းကိုကြေညာခဲ့သည်။
Linux Elive ဖြန့်ချိသူများ၏ developer များသည် ၄ ​​င်းတို့နှင့်ပါ ၀ င်သောဤ distro ဗားရှင်းအသစ်ကိုထုတ်မထုတ်နိုင်ခင်နှစ်ရှစ်နှစ်ကြာခဲ့သည်။
Softmaker သည်၎င်း၏ Nuremberg ပါတီပညာရေးအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် Linux နှင့် Windows အတွက်ဗားရှင်းတွင်တူညီသောအမည်ရှိရုံးခန်းများရှိသည်။
ReactOS 0.4.9 ဖြန့်ချိပြီးနောက်တစ်လအကြာတွင်နောက်ထပ် version ကိုစတင်ရေးဆွဲနေပြီဖြစ်သည်။
Slimbook Kymera: Linux desktops အသစ်များစတင်ခြင်း
Slimbook ကထပ်မံပြုလုပ်သည်၊ ၎င်းကိုထုတ်လွှတ်မှုအသစ်နှင့်အံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Linux ပါ ၀ င်သည့် Kymera desktop ကွန်ပျူတာအသစ်နှင့်အတွင်း၌လွတ်လပ်မှုများစွာရှိသည်။
Life Strange: Storm ဟာစက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်မှာ Linux ကိုမလာခင်
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့စကားပြောဆိုရန်နှင့်သံသယများစွာဖြစ်စေသောဗွီဒီယိုဂိမ်းအကြောင်းပြောဆိုရန်လာကြသည်။ Life is Srange ယခုစက်တင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၈ တွင် Linux သို့ရောက်ရှိမည်။
ZeroPhone - Raspberry Pi ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါ
တီထွင်ဆန်းသစ်သောဝါသနာရှင်များသည် Raspberry Pi Zero minicomputer နှင့်အခြားအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများမှလက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
လွှတ်တင်မှုအတွက်တာဝန်ခံဖြစ်သော Derek Foreman ကဤသည်သည်ပုံမှန်စည်းချက်ဖြင့်ထုတ်လွှင့်သောနောက်ဆုံးဗားရှင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုရေးသားခဲ့သည်။
GNOME 3.30 "Almeria" ကိုတရားဝင်ဖြန့်ချိပြီးဖြစ်သည်
ခြောက်လဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပြီးတွင် Gnome desktop ၏ version 3.30 ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။ အခြားအရာများအပြင် desktop စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အသုံးပြုမှုကိုတိုးတက်စေသည်။
KDE desktop ပတ်ဝန်းကျင်သည် Samba နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းအတွက်တိုးတက်မှုများရရှိခဲ့သည်
KDE စီမံကိန်းရေးဆွဲသူ Nate Graham က KDE desktop ပတ်ဝန်းကျင်သည် bug fixes အသစ်များနှင့်အထူးသဖြင့်တိုးတက်မှုအသစ်များကိုရရှိခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်
Linux Kernel သည် GNU Linux system များ၏အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးမည်သည့် version ကို Kernel တွင်အသုံးပြုသင့်သည်ကိုသိသည်။
Windows 95 သည်အခြား application တစ်ခုအနေဖြင့်လည်း Linux သို့လာသည်
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်ဖတ်နေစဉ်သင့် operating system ထဲမှာ Windows 95 ကိုထပ်မံလျှောက်ထားရန်ဖြစ်နိုင်ပြီးဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
CentOS Linux 7.5 ကို IBM POWER9 ဗိသုကာပညာအတွက်ရရှိနိုင်သည်
Red Hat မှလွတ်လပ်သောစီမံကိန်းတစ်ခုအဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးလူထုမှတီထွင်ခဲ့သော CentOS ဖြန့်ဖြူးမှုကြီးကိုယခုငါတို့အားလုံးသိသင့်သည်။ CentOS 7.5 ၏နောက်ဆုံးပေါ်ပုံရိပ်သစ်များသည် IBM POWER9 ဗိသုကာအထောက်အပံ့ဖြင့်အချို့သောစက်များရှိသည်
Subor Z + သည် AMD နည်းပညာနှင့်အတူတရုတ်ဂိမ်းစက်သစ်
Subor Z + သည်တရုတ်ဂိမ်းဂိမ်းစက်သစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Sony PS4 Pro၊ Microsoft Xbox One X နှင့် Nintendo Switch တို့ကိုတိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ Subro Z + သည် Linux ကိုကြိုတင်ထည့်သွင်းထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့တွင်သတင်းကောင်းရှိပါသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများကြောင့်၎င်းကိုပိုင်ဆိုင်ရန်ကြာမြင့်စွာကြာမည်မဟုတ်ပါ။
KDE Frameworks 5.49 ဗားရှင်းသစ်ကိုယခုရရှိနိုင်သည်
KDE မူဘောင်များသည် GNU Lesser အောက်တွင်ဖြန့်ဝေထားသော KDE Plasma5နှင့် KDE Applications များအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။
Haiku OS ယခုတိုးတက်လာသော drivers နှင့် GCC 8 နှင့်အတူ
Haiku OS သည် MIT အောက်လိုင်စင်ရပြီး open source operating system တစ်ခုဖြစ်ပြီး x86, PPC, ARM နှင့် MIPS ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးအတွက်ရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းကို Haiku OS ဖြင့်ရေးသားသည်၊ ၎င်းသည် drivers များနှင့်မတူကွဲပြားသည့် GCC 8 ကဲ့သို့သော package အသစ်များ၏ဗားရှင်းများလည်းပါရှိသည်။
ပထမ ဦး စွာ Nautilus file manager သည်မကြာသေးမီကထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သော features အသစ်များနှင့်အဆင့်မြှင့်မှုများကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
အခုဆိုရင် Android 8.1 ကို Raspberry Pi မှာရရှိနိုင်ပါပြီ
တရားဝင် Raspberry Pi အတွက် Android ဗားရှင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏စနစ်ကိုသင်၏ Raspberry Pi တွင်ခံစားချင်ပါက
ဥရောပမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေသစ်ကြောင့် Wikipedia သည်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သည်
၅ နှစ် Linux ချို့ယွင်းချက်ကတိုက်ခိုက်သူများကို cryptocurrencies ခွင့်ပြုသည်
ကောင်းပြီ၊ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က TrendMicro သည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Linux system များတွင်အားနည်းချက်အသစ်တစ်ခုကိုဟက်ကာများအားလင်းနို့ဆာဗာများနှင့်စက်များ အသုံးပြု၍ cryptocurrencies သတ္တုတူးဖော်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
Dell သည် Ubuntu နှင့်အတူ notebook အသစ်များဖြန့်ချိသည်
developer များအတွက် Ubuntu နှင့်အတူ Dell မှဖြန့်ချိသည့် laptop အသစ်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင့်အားပြောပြပါမည်
Canonical သည် Snaps မှတစ်ဆင့် crypto တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုရပ်တည်ခဲ့သည်
Red Hat ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင် CoreOS ဘာဖြစ်သွားမလဲ။
ယခုဆွေးနွေးပွဲများစွာထွက်ပေါ်လာသည့် CoreOS စီမံကိန်းတွင် Red Hat ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သော Red Hat သည်မည်သည့်အရာဖြစ်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြသည်။
Ubuntu 18.04 LTS ဗားရှင်းအသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရရှိထားပါပြီ
ကောင်းပြီ၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွင် Ubuntu ၏တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းအသစ်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Bionic Beaver ကုဒ်နံပါတ်ဖြင့်၎င်းကို Ubuntu 18.04 ဗားရှင်းသို့ရောက်ရှိလာသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့သည်ထုတ်ဝေမှုအသစ်ကိုကြေငြာရန်ကျေနပ်သည်။ ကျနော်တို့နှင့်အတူအသစ်သောအင်္ဂါရပ်များ, ပြုပြင်မှုများကိုခံစားရန်စတင်ပါလိမ့်မယ်။
Netflix ပါဝင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သည်ယခုပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ယခုအခါပတ်ဝန်းကျင်အသစ်သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောတိုးတက်မှုများနှင့် Amazon ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပေါင်းစည်းမှုတို့ပါ ၀ င်သည်
ကျွန်ုပ်၏သတင်းအချက်အလက်ကိုကျွန်ုပ်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအာရုံစိုက်စေပြီး၊ အင်တာနက်ပေါ်တွင်ပြောဆိုခြင်းကိုအနိုင်ယူသောအရာသည်အောက်ပါဖြစ်သည်။ လပေါင်းများစွာအသုံးပြုသူများ၏သဘောတူညီချက်မပါဘဲ cryptocurrency သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့်ပတ်သက်။ အချို့သောပြsomeနာများရှိခဲ့သည်။
Microsoft သည်သမိုင်းတွင်ပထမဆုံးအကြိမ် Linux အခြေပြုစနစ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်
Azure Sphere OS သည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီးအရာများ၏အင်တာနက်လုံခြုံရေးကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤစနစ်ဖြင့်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်သည်ဤinရိယာ၌ရာထူးတစ်ခုကိုစတင်ရန်အဆိုပြုထားသည်။ အမှန်မှာကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည့်ကိရိယာများသည်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ရှိသည့်အရာမဟုတ်ပါ။
Gentoo သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အနှစ် ၂၀ နီးပါးမျှအတူရှိနေခဲ့ပြီးထိုအချိန်များအားလုံးထဲတွင်အောက်ဖော်ပြပါအချက်အချို့ကိုကြည့်ကြပါစို့။
E-Learning Training ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာကွန်ဂရက် - Chamilo ညီလာခံ
ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ဝမ်းသာပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည် Chamilo Conference Lima 2017 တွင်ပါ ၀ င်ခြင်းဖြစ်သဖြင့် ...
ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးလ ၀ င်သည့်ဘလော့ဂ်ကျင်းပခြင်း၏အခမ်းအနားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဆက်လက်တည်ရှိမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိထောင်နှင့်ချီသောစီမံကိန်းများအတွက်ရွေးချယ်စရာကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သော Git သည်ရပ်ရွာအတွက်ကောင်းသောသတင်း၊ ES ဗားရှင်းအသစ်ကိုထည့်သွင်းလိုက်သည်။
Libertya Open Day 2017 - စက်တင်ဘာ ၇
Libertya Open Day 2017 နှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိထားသင့်သမျှ။ စက်တင်ဘာ ၇ ရက်တွင် Savoy Hotel တွင် (Av ။ Callao 7) သင့်ကိုစောင့်မျှော်နေပါသည်။
Ubuntu 17.10 ကိုစမ်းသပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးလိုအပ်သည်
လအနည်းငယ်အကြာမှာထင်မြင်ချက်ဆောင်းပါး Y colorín colorado ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပြီး Unity 8 မှ Ubuntu ဟာငါတို့ပေးခဲ့သောနေရာမှထွက်ခွာခဲ့သည်။
သစ်ကြံပိုးခွင် 3.4 desktop ပတ်ဝန်းကျင်
Linux Mint Cinnamon သည် Cinnamon desktop ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုအသေးစိတ်ကြည့်ရှုပြီးယခုလက်ရှိတွင်မရှိသေးပါ။
AT&T သည် Linux Foundation တွင် Platinum အသင်းဝင်အဖြစ်ပါ ၀ င်သည်
ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သော AT&T သည် Linux Foundation တွင်အသင်း ၀ င်အဖြစ်ပါ ၀ င်ကြောင်းကြေငြာမိသည်။
လွန်ခဲ့သောသုံးလခန့်က Myst V: End of …ကိုအထောက်အပံ့ဖြင့်ဝိုင် version 1.9.23 ဖြန့်ချိခြင်းအကြောင်းကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြခဲ့သည်။
Linux AIO Ubuntu အရောအနှော - ISO တစ်ခုတည်းတွင် Ubuntu အခြေပြု distros မျိုးစုံ
Ubuntu-based distros များ၏မတူကွဲပြားမှုလျင်မြန်စွာကြီးထွားလာသည်။ လူအများတို့သည်စီမံကိန်းများတွင်သာတည်ရှိသည်သို့မဟုတ်အသုံးပြုကြသည်။